Kungenzeka yephule umthetho iSABC - FXI | isiZulu
Kungenzeka yephule umthetho iSABC - FXI
USABC uxoshe uBonang
Sihoxisiwe isikhalazo ngeSABC
Johannesburg - Kungase kwenzeke ukuthi kuphambene nomthetho wokukhuluma ngokukhuleka ukuhoxiswa kwesikhangisi esinoMengameli Jacob Zuma, okwenziwe yisikhondlakhondla esisakaza ngomoya iSABC, kusho abakwaFreedom of Expression Institute (FXI).
"Siyi-FXI sibona sengathi kungenzeka ukuthi iSABC inqinda amandla okukhuluma ngokukhululeka njengoba ihluleka nokuchaza kuzwakale ukuthi kungani ihoxise ukusakazwa kwesikhangisi," kusho isitatimende sakwa-FXI.
"Iyakhathaza lento njengoba kungasikho okokuqala iSABC ihoxisa isikhangisi, kungatholakali nencazelo eqondile."
I-FXI ithi kumele le nhlangano yezokusakaza ibeke obala ukuthi isinqumo sayo asikhethi iphela emasini.
Imibiko yabezindaba ithe iSABC ivale lesi sikhangisi ngoba ibona sihlambalaza umengameli.
Inkampani ehlanganise lesi sikhangisi iMetropolitanRepublic Group, ithe itshelwe ukuthi lesi sikhangisi sizovalwa ngenxa yokuthi "sehlisa umengameli isithunzi".
Okhulumela iSABC uKaizer Kganyago uthe bakhathazekile ngemibiko yabezindaba njengoba bemise lesi sikhangisi.